Malunga nathi -Amazons Furniture Materials Co.
I-Yamazonhome yasekwa ngo-2012, ekuqaleni yayiqhuba ikakhulu kwimveliso yeekhabhathi zaseMelika kunye nefenitshala yanamhlanje yaseYurophu. Ngoku, kuye kwaba ngumthengisi wefanitshala ophakathi, okwaziyo ukubonelela ngeesofa ezixhonyiweyo, ifanitshala yeplanga eqinileyo, ifenitshala yefenitshala ethe tyaba, ifanitshala yezilwanyana kunye nempahla yezemidlalo. Inkampani inabasebenzi abali-180 kwaye isityalo sigubungela indawo ye-18,000 yezikwere. Ime kwi-Nombolo 300 kwisitrato i-Yuanfeng, kwisiXeko saseShouguang, kwiPhondo laseShandong. Inemigca yemveliso yefenitshala esebenza ngoomatshini abathathu, oomatshini abazenzekelayo beepaneli zokusika, oomatshini ababopha umda, oomatshini bokuhlukumeza, kunye namaziko e-CNC. Nezinye izixhobo zokuvelisa ifanitshala. Kukho abaqulunqi aba-5 befenitshala yokhuni oluqinileyo, ifanitshala yepaneli, kunye nefenitshala yezilwanyana zasekhaya, abanokuyila bavelise iintlobo ngeentlobo zefanitshala ngokweemfuno zabathengi.
Ngo-2020, le nkampani iza kuphehlelela iqela elitsha kwimveliso ye-R & D yemidlalo, ebandakanyeka ikakhulu kwi-R & D kunye nokuveliswa kweebhodi zokuhamba phezu kwamanzi kunye nezikhephe ezihamba ngoomoya. Iimveliso zenkampani zithengiselwa amazwe ahlukeneyo kunye nemimandla eYurophu, eMelika, kuMbindi Mpuma, eAfrika nase Mzantsi Melika, kwaye imali yokuthengisa yonyaka ingaphezulu kwezigidi ezingama-60 zeedola zaseMelika. Wamkelekile abathengi phesheya ukutyelela inkampani yethu uxoxe ngentsebenziswano.
Imilinganiselo yethu yintliziyo yethu. Basebenza njengekhampasi, kuba bachaza indlela yokusebenza. Babonelela ngobunye benjongo kuwo onke amanqanaba okuziphatha kombutho.
I-Yamazonhome ivela ekuvelisweni kwefanitshala yase ofisini kwaye ngoku iphuhle ibeyishishini elikhulu lokuvelisa ifanitshala edibanisa imveliso kunye nokuthengiswa kweesofa ezilula, ifanitshala yezilwanyana zasekhaya, ifenitshala eyenziwe ngomthi enefreyimu entle kunye nezinto zokwenziwa kwefanitshala. Inkampani yayisekwe ekuqaleni ngumphathi woluntu uMeng Linggang. Ngokusekwe kwingqondo yokufuna ukusinda ngentembeko kunye nokufuna uphuhliso kunye nokuyila, inkampani iqhubela phambili kwindlela yokuwela umda kumda we-e-yorhwebo kwimveliso yefenitshala yemveliso.
Umgca wemveliso yefenitshala yale mihla isandula ukwakhiwa yiYamazon ifezekisa imveliso yonyaka ye-72,000 yeemitha zesikwere zefanitshala yepaneli. Yenza imisebenzi emitsha engama-39, uzise ingeniso engaphezulu kwiintsapho ezingama-39 kwaye wenze iivangeli ezininzi kwiintsapho zabasebenzi